သင်၏မိသားစုနေအိမ်ကိုဖွင့်ရန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းများ - အများပိုင်သတင်းများ - အွန်လိုင်းစီးပွားရေး၊ လက်ကားနှင့် B2B စျေးကွက်သတင်း
အယ်ဒီတာရဲ့ Pick မေလ 10, 2021 မေလ 7, 2021 Sierra Powell ဘ‌‌လော့ခ်, အယ်ဒီတာရဲ့ Pick, လူနေမှုပုံစံစတဲ့
သင့်ရဲ့ခေါင်မိုး Fixed Get
သင်ကြည့်သင့်သည့်သင့်အိမ်၏ပထမဆုံးနေရာတစ်ခုမှာသင်၏ ဦး ခေါင်းအထက်theရိယာဖြစ်သည်။ သင့်ရဲ့ room ည့်ခန်းထဲမှာထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာမင်းမိုးရွာတာ၊ နှင်းဖုံးတာမလုပ်ချင်ဘူး။ နံရံပေါ်မှောင်မိုက်သောသို့မဟုတ်စိုစွတ်သောအစက်အပြောက်များ၊ ရုတ်တရက်ယိုခြင်းသို့မဟုတ်အခြားစိုးရိမ်ဖွယ်လက္ခဏာများကိုသင်သတိပြုမိလျှင်၊ စီးပွားဖြစ်အမိုးအတွက်ကျွမ်းကျင်သူများ.
ဤသည်မှာသင်ကိုယ်တိုင်လုပ်ဆောင်ရန်အရည်အချင်းပြည့်မှီသောအလုပ်မျိုးမဟုတ်ပါ။ အကယ်၍ သင်သည်အသက်ကြီးလျှင်သို့မဟုတ်အိမ်ခေါင်မိုးကျွမ်းကျင်မှုမရရှိလျှင် ပို၍ မှန်ကန်လိမ့်မည်။ သင်၏ကိုယ်စားဤအလုပ်ကိုကိုင်တွယ်ရန်ကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး ကိုခေါ်ခြင်းက ပို၍ ကောင်းသည်။ ထိုသို့ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သင့်အားအချိန်၊ ကြိုးစားအားထုတ်မှုနှင့်ငွေများစွာစုဆောင်းနေစဉ်သင့်အားဘေးကင်းစွာနေရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
သင်၏အိမ်ခေါင်မိုးပေါ်ရှိကြွေပြားများသို့မဟုတ်ယိုစိမ့်မှုများကိုပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းသည်သင်၏အိမ်ကိုအလေးအနက်ပြန်လည်ရောင်းချခြင်းတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ပေးသည့်အပြောင်းအရွေ့တစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အိမ်တွင်သင်နေထိုင်စဉ်ကာလအတွင်းပိုမိုမြင့်မားသောဘဝအရည်အသွေးကိုခံစားနိုင်စေပါလိမ့်မည်။ ဤအကြောင်းပြချက်များနှင့်အခြားအရာများကြောင့်၎င်းသည်ကုန်ကျစရိတ်သက်သာပြီးစက်မှုလုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အိမ်ပိုင်ရှင်များကအလွန်ထောက်ခံသည်။
အကယ်၍ သင်သည်တစ်တန်လျှင်ငွေများစွာမကုန်ဘဲအိမ်ကိုထူးခြားစွာပြောင်းလဲလိုပါကကော်ဇောများနှင့်ကော်ဇောများကိုကြည့်ပါ။ သင်သည်ဤအရာတစ်ခုခုကိုအစားထိုးကတည်းကကြာပြီဘယ်လောက်? အချို့ကိုသင်၏အိမ်ဟောင်းမှယူဆောင်လာပြီးသင်အိမ်ဝယ်ပြီးကတည်းကအခြားသူများရှိခဲ့သည်။ သူတို့ကအရမ်းဝတ်ဆင်ဖွယ်ရှိသည်။
ဤကဲ့သို့သောကြောင့်သင်၏အိမ်ထဲသို့မည်သည့်ပုံစံအသစ်ကိုသင်မိတ်ဆက်နိုင်သည်ကိုစဉ်းစားရန်သင့်အတွက်အကြံဥာဏ်ကောင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်၏ကော်ဇောများနှင့်ကော်ဇောများကိုအသစ်သော၊ ပိုမိုဖက်ရှင်သောမော်ဒယ်များဖြင့်အစားထိုးခြင်းသည်ပထမဆုံးသောအစမျှသာဖြစ်သည်။ ဒီကနေ၊ မင်းရဲ့အိမ်ကိုနောက်ဆုံးပေါ်ပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုပေးစွမ်းနိုင်မှာပါ။ ဒါဟာပြန်လည်ရောင်းချတန်ဖိုးကို add စေခြင်းငှါကြည့်ပါတယ်။
သင်လုပ်နိုင်သည့်အခြားအရာများစွာရှိသည် သင့်မိသားစုအိမ်သို့ spruce။ သင်လုပ်နိုင်သောအကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုမှာသင်၏မီးဖိုချောင်နှင့်ရေချိုးခန်းfixရိယာများကိုပြုပြင်ခြင်းဖြစ်သည်။ ဤရွေ့ကားသင့်အိမ်သို့aည့်သည်စစ်ဆေးချင်သောပထမ ဦး ဆုံးသောနေရာများဖြစ်သည်။ ၀ ယ်သူထံဆွဲဆောင်ရန်၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သောအသွင်သဏ္inာန်ရှိကြောင်းသေချာစွာသင်လိုအပ်သည်။
သင်၏မီးဖိုချောင်နှင့်ရေချိုးခန်းတို့တွင်နစ်မြုပ်ခြင်းနှင့်ရေကန်များအားလုံးကိုစစ်ဆေးခြင်းဖြင့်စတင်နိုင်ပါသည်။ သူတို့အစားထိုးကတည်းကဘယ်လောက်ကြာခဲ့သလဲ အခွင့်အလမ်းကောင်းများမှာသင်နှင့်အတူအိမ်နှင့်အတူတူအတူတူရှိနေနိုင်ဖွယ်ရှိသည်။ အကယ်၍ သူတို့သည်သံချေးများလာသည်သို့မဟုတ်ပေါက်ကြားလာပါက၎င်းတို့အားလည်းအငြိမ်းစားယူပြီးအသစ်များကိုအသစ်ဝယ်နိုင်သည်။
ကြမ်းပြင်နှင့်ကြွေပြားအခြေအနေကဘာလဲ။ သင့်ရဲ့အုပ်ကြွပ်များအက်နေပြီသို့မဟုတ်မြုပ်နေပြီဆိုပါက၎င်းတို့ကိုဖြိုဖျက်ကာအသစ်များရရန်လိုကောင်းလိုပေမည်။ အကယ်၍ ၎င်းတို့သည်ကောင်းမွန်သောပုံသဏ္inာန်ရှိသော်လည်းအက်ကြောင်းအနည်းငယ်ရှိပါက၎င်းတို့ကိုအနည်းငယ်ထိမိစေရန်အချိန်နှင့်ပိုက်ဆံအနည်းငယ်ဖြုန်းနိုင်သည်။ ဒီeitherရိယာတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့ဝေါလ်ပေပါဘယ်လောက်အသက်ကြီးပါလဲ။ အခန်းနှစ်ခုလုံးကိုဖြုတ်ချပြီးဆေးထိုးရန်အချိန်ဖြစ်နိုင်သည်။
သင်၏အိမ်ကိုပြုပြင်ရန်ငွေများလွန်းခြင်းကြောင့်စိတ်ပူစရာမလိုပါ။ အကယ်၍ သင်၏ကဒ်များကိုမှန်ကန်စွာကစားပါကသင်သုံးစွဲရန်မျှော်မှန်းထားသည်ထက်များစွာလျော့နည်းစွာပြုလုပ်နိုင်သည်။ သင်၏ပြန်လည်ရောင်းချမှုတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်သည့်ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံမှုများပြုလုပ်နိုင်ရန်သင်၏စွမ်းအားအားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ရန်သင့်အပေါ်မူတည်သည်။ သင်၏အိမ်ကိုစတင်တည်ဆောက်ရန်အချိန်သည်ယခုပင်ဖြစ်သည်။
အများပိုင်သတင်း နေအိမ် အိမ်မှာတိုးတက်မှု လူနေမှုပုံစံစတဲ့